Ukushintshwa Kwebhethri Lemoto - Usizo Oluseceleni Komgwaqo Okhanyisayo
Isevisi Yokushintshwa Kwebhethri Lemoto
Ukushintshwa Kwebhethri Lemoto
Ukushintshwa Kwebhethri Lemoto, Siza Kuwe!
Our isevisi yokushintshwa kwebhethri yemoto isevisi yosizo eseceleni komgwaqo etholakala kuphela ezimotweni ezinebhethri elifinyeleleka kalula egumbini lenjini, noma esiqwini. Asimiseli amabhethri asensimini ngezimoto ezidinga ukususwa kwamasondo, ukususwa kwesihlalo somshayeli, izingxenye zenjini, noma ukususwa kwamamojula enjini ukuze kufinyelele ibhethri lemoto. Kunoma yiluphi uhlobo lwemoto olungenayo ibhethri efinyeleleka kalula ukuze isuswe futhi ifakwe kwenye indawo, sincoma kakhulu ukuyisa imoto esitolo esidayisa kahle lapho umsebenzi ungenziwa ezimeni eziphephile.
Ikhasimende kumele lithenge ibhethri ngokuhlukile kumthengisi wendawo noma elidayisa ibhethri lendawo Sizolilanda ibhethri uma belikhokhelwe kusengaphambili yikhasimende esitolo sasesitolo. Lapho uthenga ibhethri yemoto online kusuka kumthengisi wangakini, uzodinga imininingwane elandelayo: Unyaka / Yenza / Imodeli / Injini, noma i-VIN #.
Uma imoto yakho idinga ukubhaliswa kwebhethri, singafaka futhi sibhalise amabhethri (amabhethri ohlelo) kulezi zimoto ezilandelayo:
I-Land Rover (2007-2016)
* Akuzona zonke izimoto ezidinga ukubhaliswa kwebhethri.
Imininingwane engaphezulu mayelana ne-Sparky Express Roadside Assistance
Ungalucela kanjani usizo lomgwaqo
Unga-oda noma iyiphi yethu izinsizakalo zosizo lomgwaqo Ngokulandelayo:
- Ngocingo: (647) -819-0490
- Ku-inthanethi: ungasebenzisa leli khasi ukubhuka i-aphoyintimenti nathi nganoma yiziphi izinsizakalo zosizo lomgwaqo esihlinzeka ngazo. Lapho sesitholile i-oda lakho lomsebenzi, sizokushayela ngokushesha ukuze siqinisekise indawo okuyo futhi sikunikeze i-ETA ngqo.
Izinsizakalo zethu zitholakala kuphela endaweni yaseToronto & GTA, njengoba kukhonjisiwe ohlwini lwethu ku-Google.
Ngeke sakubuza imininingwane yekhadi lesikweletu, noma sicele noma iyiphi inkokhelo kusengaphambili, noma ngabe ubhukha izinsizakalo zethu ku-inthanethi. Zonke izinkokhelo zifuneka ngemuva kokuqedwa komsebenzi, futhi uchwepheshe wethu uzocubungula inkokhelo yakho ngekhadi lesikweletu, ikhadi lasebhange, ukheshi noma amanye amafomu okukhokha anjenge-Apple Pay, i-Google pay, njll.